BGR - - ဒုတိယလေထီးစမ်းသပ်ပြီးနောက်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လာမယ့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ရန် ESA မစ်ရှင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ ဒုတိယလေထီးစမ်းသပ်ပြီးနောက်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လာမယ့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ရန် "အဆိုပါ ESA မစ်ရှင် - BGR
ဒုတိယလေထီးစမ်းသပ်ပြီးနောက်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လာမယ့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ရန် ESA မစ်ရှင် - BGR
Tele RELAY တစ်ခု 13 သြဂုတ်လ 2019
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အာကာသယာဉ် Send တစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေမယ်မီးတောင်မပါဘဲအနီရောင်ဂြိုလ်ပေါ်မှာထားအညီအမျှခက်ခဲသည်။ ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီကောင်းစွာသတိပြုမိသည်နှင့် မကြာသေးခင်ကလေထီးစမ်းသပ် အဆိုပါမစ်ရှင် ExoMars အချိန်ဇယားအပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိ 2020 ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
မေလနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးကယခင်စမ်းသပ်မှုအလားအလာကြည့်ရှုပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအလုပ်၏အမြောက်အများသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုကြီးမားသောလေထီးဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပျက်ကွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုလေထီးစနစ်၏တစ်ဦး updated ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းပေမယ့်ပြဿနာကသူ့ကိုနောက်တဖန်ခေါင်းတောင်းဆိုနေတာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ExoMars 2020 မစ်ရှင်နှေးနဲ့ soft ဆင်းသက်ခွင့်ပြုရန် sequence ကိုအတွက်ဖြန့်ချထားကြောင်းရှုပ်ထွေးလေထီးသည့်စနစ်ရှိပါတယ် lander ။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်ရောက်ရှိ။ သေးငယ်လေယာဉ်မှူးများကအခြားဆင့်ကဲတပ်ဖြန့်လေးလေထီးစုစုပေါင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ပြီးနောက်နှစ်ဦးကိုအဓိကလေထီးတယောက်ကိုသိမ်း ယူ. ရသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု, အကြမ်းဖျင်းအတွက်မေလအတွက်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်စေလွှတ်လေးခုဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးရာအရပျကို ယူ. , ဒါပေမယ့်နှစ်ခုအဓိကပြွန်လမ်းတစ်လျှောက်ပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုများ၏အသစ်ကစီးရီးအတွက်တူညီခဲ့ပေမယ့် ESA ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပိုကြီးတဲ့ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျး၏ကြိုတင်အပြည့်အဝငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းပေါ်လာမှတ်ချက်ပြုထားသည်။
"ဒါဟာနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မူမမှန်၏ရလဒ်အဖြစ်မိတ်ဆက်သည့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဒီဇိုင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဒုတိယစမ်းသပ်သွားမကူညီဘူးရှိသည်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်အမြဲကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်တည်ဖို့အပြစ်အနာအဆာနားလညျပွီးပြင်ပေးဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည် လာမည့်နှစ်တွင်ဖွင့်ဖို့, "သူ Francois Spoto ESA ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဟုဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကလုံလုံခြုံခြုံင်း၏ထူးခြားတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာမစ်ရှင်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာငါတို့ payload ပေးပို့ဖို့စနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကျူးလွန်နေကြတယ်။ "
အဆိုပါ 2020 ExoMars အဖွဲ့သည်ယခုလက်ရှိ၎င်း၏အလုပ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်အဖြေတစ်ခုဒီဇိုင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ထိုပြဿနာ။ ကအတူလိုက်ပါသော lander နှင့် Rover ကြံ့ခိုင်စက်တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားစွာပင်အတင်းအကျပ်ဆင်းသက်သမျှသော ESA ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမစ်ရှင်များအတွက်စီစဉ်ထားခဲ့ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမစ်ရှင် ESA သေချာရက်စွဲတစ်ခုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့လေထီးစနစ်အဖြစ်နှင့်ကောင်းစွာ-စမ်းသပ်ပြီးလိမ့်မည်ဟုအောင်အချို့သောကံလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် 2020 အတွက်ပစ်လွှတ်မှုအတွက်စီစဉ်ထားသည်။
Image ကိုအကြွေး: နာဆာ / JPL-Caltech / MSSS
ဝံမရဲကိုရောက်လာတဲ့အခါ "ဟုအဆိုပါ Kool-Aid ကိုက Man နဲ့တူ" ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ၏နေအိမ်တွင်ကျူးကျော် - BGR
BGR - နာဆာထိုက်အဆိုပါနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို 2022 အားဖြင့်ပျံသန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်
Alain Delon ဆေးရုံတင်: သူဎ
အိန္ဒိယ: 70 နှစ်ပေါင်း 707ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်နှစ်များတွင်ဖျက်သိမ်းမရနိုငျကတည်းကလူနည်းစုအကြား install လုပ် BJP ဆန့်ကျင်မုန်းတီးမှု: Mukhtar ဘတ်စ် Naqvi | အိန္ဒိယသတင်း
သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုခိုးယူထားသည်ဆိုပါက Chrome ကိုမကြာမီသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ
သြဂုတ်လ 23 2019 ၏နားထောင်မိန့်ခွန်း - ဗွီဒီယို
သတင်းရင်းမြစ်: ဘာစီလိုနာ-နေမာ Dembele လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်စဉ်းစား
TECH & Telecom1,614